आज प्रेम दिवसको अवसरमा यो मर्मस्पर्शी पिडा तपाईको लागी ! त्यो बिगट ठाउ, गरिबी, पिडा, त्यो परिवार, तिनी मासुम चेहरा हरु - Enepalese.com
आज प्रेम दिवसको अवसरमा यो मर्मस्पर्शी पिडा तपाईको लागी ! त्यो बिगट ठाउ, गरिबी, पिडा, त्यो परिवार, तिनी मासुम चेहरा हरु
इनेप्लिज २०७५ फागुन २ गते ११:५३ मा प्रकाशित
करिब ११ बर्ष पुगेका बिक्रम दिनभरी सडकमा हुन्छन र रात परेपछि कहिले काकाको घर कहिले सडकको पेटीमानै रात बिताउछन् । सडकको पेटीमा बसेर गाउँदै मागेको अवस्थामा मैले देखे उनको त्यो जादुमय स्वरले मलाई मार्मिक बनायो किनकि बिक्रमले सडकमा बसेर अत्यन्तै मार्मिक गित गाउँदै थिए ।
बिक्रम लावतीको यस्तो प्रतिभा देखेपछि म र मेरा ३ जना साथी मिलेर पाँचथर जिल्लाको मौवामा बिक्रमको घर गयौ । त्यहाँ पुगेपछि हामी अत्यन्तै दुखित भयौ किनकि बिक्रमको घर अनि परिवारको त्यस्तो दर्दानाक अवस्था देख्दा सबैका आँशु रसाए । सम्पूर्ण नेपाली माझ पुराउन सबैले यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्दिनुहोला ।